AFGOOYE, Soomaaliya - Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxay weerar ay dagaalyahano aad u hubeysan oo ka tirsan Kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen Fariisin ay ciidamada dowladda ku leeyihiin degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Weerarka oo isku bedalay dagaal fool ka fool ah oo dhex-maray labada dhinac ayaa waxaa ka dhashay khasaaro dhaawac u badan, kaasoo la sheegay inuu labadda dhanba soo kala gaaray.
Dadka degaanka ayaa sheegay in iska hor-imaadka oo ka dhacay xaafada Buulla-Fullay oo ka tirsan Afgooye leysku adeegsaday Hubka culus iyo fudud ayna maqlayaan Daryenka Rasaasta culus.
Fahfaahinada laga helayo dagaalka ayaa intaas ku daraya in ciidamada dowladda ay iska caabin xoogan kala hor-tagaan Ragga Shabaabka ah ee duulaanka qorsheysan kusoo qaadan bartooda.
Saraakiisha amaanka ee ku sugan degmada Afgooye ayaa guulo ka sheegtay dagaalka, inkastoo dhanka Al-Shabaab aanan illaa iyo haatan laga haynin war rasmi ah oo ay kasoo saareen dagaalkaan.
Todobaadkii hore ayay ahayd markii weerar kan lamid ah lagu soo qaaday Saldhig ciidanka dowladda ku leeyihiin Aaga la wareeray, inkastoo aanan la ogayn hadii uu jiro khasaaro.
Dagaalkaan cusub ayaa imaanaya maalmo un kadib markii Hay'addaha amaanka ay gacanta kusoo dhigeen 11 Ruux oo ay ku jirto Haweenay, kuwaasoo la sheegay inay Al-Shabaab yihiin.
Degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, oo 35-KM dhanka Waqooyi Galbeed uga beegan Muqdisho, ayaa waxaa kusoo badanayay mudooyinkii dambe weeraro Al-Shabaab kusoo qaado xilli Hay'addaha amaanka kordhiyeen howlgalada amni sugista.
Dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayeen jugta qaraxyo waaweyn oo ka dhacay....